Xarunta Daahfurka Sayniska Furan iyo AfrikaArXiv Daahfurka Adeegga Diyaarsanaanta Magaca - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 25th Juun 2018 25th Juun 2018
Xarunta Sayniska Furan (COS) iyo AfrikArXiv Waxay billaabeen adeeg cusub oo diyaarin ah oo hore ugu marin doona aqoonta sayniska ee waddamada Afrika dhinacyo badan oo saynis ah.
Sidoo kale lagu daabacay at cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service/
AfricanArXiv (African Science Archive) ayaa ah meel keyd furan oo furan oo lacag la'aan ah oo laga helo #SayniskaAfrica saynisyahannada Afrikaanka ah si ay ula wadaagaan wax-soo-saarkooda dhammaan daraasaadka sayniska, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn beeraha, bayoolajiga, fiisigiska, kimistariga, waxbarashada, cilmiga caafimaadka, cilmiga bulshada, cilmiga deegaanka, iyo injineeriyadda.
Fikradda ayaa la soo saaray intii lagu jiray Shirweynihii Kowaad ee Qalabka Sayniska ee Afrikada furanAfrikaOSH) Kumasi, Ghana, markii koox aad u tiro badan oo Afrikaan ah iyo saynisyahano kale oo caalami ah ay ka wada-hadleen arrimo ku saabsan aaladda Open Science Hardware ee xaaladda Afrika. Baahida lagama maarmaanka u ah in lacag guud laga helo sayniska furan ee Afrikaanka ayaa la soo dhigay, waxaana laga soo qoray cinwaanka iyo jawaabta Agaasimaha COS Brian Nosek iyada oo la soo jeedinayo soo jeedin ku aaddan sidii loo diyaarin lahaa kaydinta taariikhda Afrika oo ah qayb ka mid ah madal noocan ah: https://twitter.com/AwareAwuah/status/985171790438813697
AfricArXiv waxay noqon doontaa nidaam daabicis isku dhafan oo asal ah kaas oo isku daraya xawliga xawaaraha ee adeegaha diyaarinta iyo faa iidooyinka tayada dhexdhexaadka ah. Fikrad ahaan, qoraallada qoraallada ah ee lagu daabacay AfricanArXiv waxay kuu horseedi karaan isku kalsooni weyn xagga aqoonta sayniska ee ka socota Afrika iyadoo la siinayo tayo sare iyo daah furnaan, kordhinta helitaanka natiijooyinka, iyo kordhinta xawaaraha wadaagista aqoonta sayniska.
Justin Ahinon, oo ah aasaasaha AfricanArXiv: "Waxyaabaha sayniska Afrika ee ku jira webka wali wey yar yihiin," ayuu yiri Justin Ahinon. “Waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno AfricArXiv, oo ah barxad cusub oo maadooyin kala duwan ah oo loogu talagalay daabacaadda cilmiga, si loo buuxiyo farqigaas. Waxaan u dhiseynaa keydka dijitaalka ah ee saynisyahannada Afrikaanka ah si ay ula wadaagaan dhammaan wax soo saarkooda cilmi-baarista, oo ay ku jiraan horay, dib-u-dhigis, koodh iyo xog. ”
Jo Havemann ayaa intaas ku daray, “AfricArxiv waxay isu geyn doontaa oo ka tarjumaysaa kala duwanaanta cilmibaarista Afrikaanka ah soo saaristeeda isla markaana ka dhigaysa mid ay heli karaan Afrikaanka iyo sidoo kale aqoonyahannada aan Afrikaanka ahayn iyo kuwa aan cilmiga lahayn ee adduunka. Iyada oo ay weheliyaan meela kale oo horudhac ah oo daabacan (Arabixiv, INA-Rxiv) tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kobcinta sayniska. ”
AfricanArXiv waa adeegga labaatankii ugu horreeyay adeegga diyaarinta bulsheed ee lagu dhisay astaanta calanka COS, OSF, kaas oo ka caawiya cilmi-baarayaashu qaabeynta iyo maaraynta mashruucyadooda shaqo, keydinta xogta, DOIs, iyo iskaashi. COS waxay awood u siisay inay ka caawiso bulshooyinka cilmi baarista ee ku jira anshaxyo fara badan sidii ay ku heli lahaayeen cilmi baaris cusub sida ay wax u dhacaan iyo inay jawaab deg deg ah ka helaan cilmi baaristooda kahor intaan la daabicin. Nidaamka udiyaargarowga bulshada ee COS wuxuu siiyaa ururro raba inay bilaabaan howlahooda u diyaarinta adeegyadooda xalka sahlan, adag, iyo xasiloonida. COS waxay hadda taageerta adeegyada sumadda leh ee cilmiga badda iyo cilmiga dhulka, cilmu-nafsiga, cilmiga bulshada, injineernimada, beeraha, cilmiga bulshada, sawirka, cilmi baarista isboortiga, cilmi baarista isboorti, cilmi baarista, sharciga, maktabadda iyo sayniska macluumaadka, nafaqada iyo adeegga diyaarinta Indonesia.
In ka badan 2 milyan oo diyaarin hore ayaa lagala soo qaatay ilo kala duwan waxaana laga heli karaa iyada oo la doorto mowduuc xiise leh, galitaanka shuruudaha raadinta gaarka ah, ama baarista muruqyada horay loogu daray adeegga. Kuwa ka qeybqaata Preprint ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay ku daraan xiriiriyeyaasha baaritaankooda, haddii la heli karo. Haddii dejintani ay laxiriirto mashruucii hore ee OSF, mashruucaas sidoo kale si fudud ayaa loo heli karaa loona baari karaa. OSF Preprints ayaa adeegsata SHARE in la isu geeyo natiijooyinka raadinta laga helo noocyo kala duwan oo bixiyeyaasha kale ee diyaarinta sida arXiv, bioRXiv, PeerJ, CogPrints iyo kuwa kale oo galka loo galiyo.
The Xarunta Sayniska Furan (COS) waa tikniyoolajiyad aan macaash doon ahayn oo lagu aasaasey 2013 iyada oo la hiigsanayo in la kordhiyo furfurnaanta, sharafta, iyo soo saarista cilmi baarista sayniska. COS waxay higsataa himiladan iyada oo lagu dhisayo bulshooyinka dhaqannada sayniska ee furan, iyada oo lagu taageerayo cilmi-baaris metascience, iyo horumarinta iyo dayactirka aaladaha softiweerka furan ee furan.OSF, COS's flagship flagship, waa codsi websaydh ah oo isku xira oo taageersan qulqulka cilmi baarista, u oggolaanaya saynisyahannadu inay kordhiyaan hufnaanta iyo wax ku oolnimada cilmi baaristooda. Baarayaasha waxay u adeegsadaan OSF inay iska kaashadaan, dokumentiyo, kaydiyaan, wadaagaan, iyo inay diiwaan geliyaan mashruucyada cilmi baarista, alaabada, iyo xogta. Waxbadan ka baro cosio iyo osf.io.
Tags: Xarunta Sayniska Furan